ဤတွင် MICHAEL DAPAAH နှင့်မည်သို့တွေ့ဆုံရမလဲ၊ သုံးလကြာ YOUTUBE PREMIUM အခမဲ့ဖြစ်သည်။ !! - သတင်း
ဤတွင် Michael Dapaah နှင့်မည်သို့တွေ့ဆုံရန်နှင့် YouTube ၏ Premium သုံးလအခမဲ့ဖြစ်သည်။ !!!!
ယခုလတ်ဆတ်သောလတ်ဆတ်သောအနုပညာလက်ရာများကုန်ဆုံးသွားသောအခါ uni ဘဝသည်ပျင်းစရာကောင်းလောက်အောင်ပျင်းစရာကောင်းသည့်ပို့ချချက်များနှင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုသတ်မှတ်လိုက်သည်။ ဒါပေမယ့်ထိတ်လန့်မသွားပါနဲ့၊ YouTube Premium က hibernation mode ထဲကနေထွက်သွားဖို့ကျောင်းဝင်းထဲမှာရှိနေပါတယ် နှင့် နည်းနည်းသင့်ရဲ့ဘဝကို liven ။
ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့ Duvet ကိုဖယ်ရှားပြီးအခမဲ့သုံးလကြာ YouTube Premium အွန်လိုင်းစမ်းသပ်မှုကိုဖြစ်စေ၊ သူတို့ Churro Truck မှာဖြစ်စေ sign up လုပ်ပါ။ ထိပ်တန်း YouTube ကြယ်ပွင့်နှင့်အတူ Michael Dapaah (Big Shaq ခေါ်) ယခုအပတ်တွင်တက်ရောက်ပါကသင်မလုပ်ဆောင်ပါက FOMO ကိုအမှန်တကယ်စွန့်စားလိုပါသလား။
YouTube Premium မှကျေးဇူးတင်ပါသည် , ကြီးမြတ်သောဆုများကိုရယူပြီး YouTube ၏အကြီးကျယ်ဆုံးသောဒဏ္oneာရီတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆုံမိလျှင်တစ်ချိန်တည်းမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အဘယ်အရာနည်း။
သင်၏အခမဲ့သုံးလကြာ YouTube Premium ကိုစမ်းကြည့်ပါဒီနေရာကိုနှိပ်ပါသို့မဟုတ်ကျောင်းဝင်းရှိ churro ထရပ်ကားသို့လာရောက်ပါ
အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်မှာဘရွန်နိုင်းယူနီမှာ၊မိုက်ကယ် Dapaah YouTube Premium ရဲ့ Churro ထရပ်ကားမှာကျောင်းဝင်းအပေါ်တွေ့ဆုံရန် -and နှုတ်ဆက်ကျောင်းသားများကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။
အခမဲ့သုံးလကြာ YouTube Premium trial စမ်းသပ်မှု၊ ချောကလက် churros များနှင့် Michael Dapaah နှင့်တွေ့ဆုံရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။
တစ်ခု - အွန်လိုင်းမှာစာရင်းသွင်းပါ။
အဆင့် ၁: ကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ
အဆင့် ၂: သင်၏တက္ကသိုလ်နှင့်အီးမေးလ်လိပ်စာဖြင့်စာရင်းသွင်းပါ
အဆင့် ၃: သင့်နှလုံးသားဆန္ဒအားလုံးကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
အဆင့် ၄: ကျောင်းပရဝုဏ်ရှိ YouTube Premium churro ကုန်တင်ကားသို့သွားပြီးသင်၏အခမဲ့ပြုလုပ်ထားသောပစ္စည်းများကိုကောက်ယူပါ
သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုးရှင်းစွာဖြည့်စွက်ပြီးသုံးလကြာ YouTube Premium ကိုအခမဲ့ရယူပါ။ သင်ဘာဆုံးရှုံးရမလဲ
ဒါမှမဟုတ်နှစ်ခု - YouTube Premium ရဲ့ Churro Truck မှာကိုယ်တိုင် sign up လုပ်ပါ။
အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် - Kent နှင့်ရှက်ဖီးလ်
အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် - Nottingham နှင့် Middlesex နှင့် Brunel တို့ဖြစ်သည်
အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက် - Royal Holloway နှင့် Nottingham Trent တို့ဖြစ်သည်
အောက်တိုဘာ ၃၁ - Leicester
နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် - ဘာမင်ဂမ်နှင့် Coventry
ဒါဆိုမင်းဘာကိုစောင့်နေတာလဲ သင်၏ဒိုင်ယာရီထဲရှိရက်စွဲများကိုခဲတံဆွဲ။ အချို့သောတေးသီချင်းများကိုမြုပ်နှံရန်နှင့်သင်၏မျက်နှာကိုချောကလက်ချာရိုအပြည့်ပါစေပါ။
ယခုသင်၏ YouTue Premium သုံးလအခမဲ့စာရင်းသွင်းရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
• YouTube Premium ကျောင်းသားအစီအစဉ်ကိုအခမဲ့ ၃ လအခမဲ့၊ ပြီးတော့တစ်လပေါင် ၆.၉၉ ဒေါ်လာ (ဖျက်သိမ်းခြင်းမရှိပါ) ။
• YouTube Premium နှင့် YouTube Music Premium ကျောင်းသားအစီအစဉ်များကို SheerID မှဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်းအစိုးရမှတ်ပုံတင်ထားသောအဆင့်မြင့်ပညာရေးပံ့ပိုးသူများရှိအချိန်ပြည့်ကျောင်းသားများသာရရှိနိုင်ပါသည်။
အရာ SpongeBob ပဟေဠိဈဇာတ်ကောင်နံနက်
•ပထမဆုံးအကြိမ် YouTube Premium သုံးစွဲသူများသည် ၃ လအခမဲ့အခမဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုရရှိနိုင်သည်။
•နိုဝင်ဘာ ၆ ရက် ၂၀၁၉ တွင်ရွေးနုတ်ပါ။
• ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သာရွေးနုတ်နိုင်သည် https://www.youtube.com/premium/student ) android devices များ။
ကမကထပြုသူ - ဂူဂဲလ်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလီမိတက်၊ ဂေါ်ဒွန်အိမ်၊ ဘားရိုးလမ်း၊ Dublin ၄၊ အိုင်ယာလန်။